अबको ६ महिनामा कोरोना भाइरसको तेश्रो लहर देखिन सक्ने, कुन उमेर समूहलाई धेरै जोखिम ? « Salleri Khabar
अबको ६ महिनामा कोरोना भाइरसको तेश्रो लहर देखिन सक्ने, कुन उमेर समूहलाई धेरै जोखिम ?
२८ जेठ, काठमाडाैँ । अबको चारदेखि ६ महिनाभित्र सबै उमेर समूह तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेको विज्ञले औंल्याएका छन्। नेपालमा अहिले पनि करिब ८ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र खोप लिएका र बाँकीका बारेमा अन्योल रहेको अवस्थामा खोप नलिएका उमेर समूह जोखिममा पर्ने उनीहरूको तर्क छ। विकसित राष्ट्रहरूले तेस्रो लहरको जोखिममा खोप नलिएका १८ वर्षमुनिका बालबालिका पर्ने प्रक्षेपण गरिरहेकै बेला नेपालका स्वास्थ्य विज्ञको भने भिन्न धारणा छ।